पूर्वाधार विकासले ७.२ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ - Karobar National Economic Daily
पूर्वाधार विकासले ७.२ को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ
query_builderJune 21, 2017 12:43 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1737
डा. विश्व पौडेल,अर्थविद्
मौसमी अनुकूलता, नियमित बिजुलीको आपूर्ति तथा देशमा निर्माणकार्यले तीव्रता पाएकाले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत पुग्दैछ भने यसबाट उत्साहित सरकारले आगामी आवका लागि ७.२ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । चालू आवमा उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर, ऊर्जाक्षेत्रमा छोटो अवधिमै प्राप्त उपलब्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिन खोजेको अर्थविद् डा. विश्व पौडल बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार भएकाले वृद्धिदर अपेक्षित देखिएको र सरकारले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिए आगामी आवको वृद्धिदर सहजै हासिल गर्न सक्ने उनको दाबी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर साइन्समा बीईसम्मको अध्ययन गरेका पौडेलले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीबाट एमई र अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
नेपालको इतिहासलाई अर्थतन्त्रको हरेक दृष्टिकोषबाट केलाउन सक्ने खुबी भएका उनी युवा अर्थशास्त्रीका रुपमा समकालीन अर्थशास्त्रीमाझ निकै परिचित छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउने पौडेलसँग सानिमा बैंक तथा विश्व बैंकमा समेत अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । काठमाडांै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत पौडेल नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको साझेदारी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको कार्यालयमा अर्थविद्का रूपमा कार्यरत छन् । उनै पौडेलसँग संघीयता कार्यान्वयन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
मुुलुकको समकालीन अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
यतिबेला मुलुक शान्त बनेको छ । अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ यस्तो बेलामा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्छन् । आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ । सँगसँगै स्थानीय निर्वाचनले स्थायित्व ल्याउँछ भन्ने आमजनतामा महसुस भएको छ ।
अब हामीले ठूलो रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता छैन भने त्यसलाई बढाउनु पर्छ । हामीले यो वर्ष जे–जति उपलब्धि हासिल गरेका छौं, यो अहिलेसम्मकै महŒवपूर्ण उपलब्धि हो ।
चालू आवको वृद्धिदर सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा राम्रो देखियो । यो आर्थिक वृद्धिदरलाई आगामी वर्षहरूमा पनि बचाइराख्न के गनुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिलो महत्वपूर्ण कुरा त पूर्वाधार विकास हो । हामीले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । हुन त अहिले सरकारी ढुकुटीमा पैसा यत्तिकै थुप्रिएर बस्यो भनिन्छ, तर अहिले जति बजेट छ त्यो केही पनि होइन ।
लागत खर्च उच्च छ, जनशक्तिदेखि लिएर हरेक कुरामा च्यालेन्ज छ । त्यसका लागि लगानी चाहिन्छ । लगानी बढाउन बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पर्याप्त लगानी गर्ने क्षमता नहुने देशहरू पनि वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट सम्पन्न भएका छन् । पर्याप्त लगानी बढाउन एफडीआईमा सरलीकरणको विकल्प छैन ।
हामीसँग पर्याप्त एफडीआई भिœयाउने वातावरण छ त ?
छैन, एफडीआईको ममिलामा हामी निकैै पछाडि छौं । आफूले लगानी गर्न नसक्ने भए पनि बाह्य लगानी आवश्यक हुन्छ नै । हामीसँग बाह्य पैसा ल्याउने दुईवटा स्रोत छन्— एउटा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र अर्को, ऋण वा अनुदान । योे हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभरिको प्रचलन हो । हामीकहाँ एफडीआईको निकै समस्या छ ।
एफडीआई ल्याउनकै लागि हामीले बिप्पा गरेका थियौं तर त्यो सम्झौतामा मात्र सीमित देखियो; राजनीतिक दल, सरकार यसतर्फ जिम्मेवार देखिएन । नीति–नियमहरू पनि लगानीमैत्री भएनन्, जसले हामीले पर्याप्त लगानी भिœयाउन सकेनौं ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकोे कुरा गरौं अथवा दाताहरूले दिने ऋण या अनुदानको कुरा गरौं, हामीले खर्च गर्न नसक्दा लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो भनिन्छ नि ?
एफडीआई निजी क्षेत्रमार्फत हुने हो । एफडीआईप्रति हाम्रो सोच नै खराब छ । महिनौं दिनसम्म फाइल अड्काएर राखिन्छ । त्यसैले खर्च हुँदैन । सानो चिजमा पनि अलमलिँदा ठूला–ठूला कामहरू अड्किएको छ । हाम्रो नकारात्मक सोच धेरै छ । आफूले भन्दा राम्रो काम गरेको देख्न नसक्ने जुन परिपाटी छ त्यसले खर्च हुँदैन । दलहरूले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रचलन छ, त्यसले पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
हामीले लामो समयदेखि विकासको कुरा गर्दै आयौं तर हामी विकासमा अघि बढ्न सकेनौं । अब भन्नुस् कि हामी कहाँनेर चुक्यौं ?
यसको सीधा जवाफ नहुन सक्छ । विकासको कुरा धेरै पहिले नै आएका थिए । देशको विकासप्रति सरकार संवेदनशील भएन । ०४६÷४७ सालमा बहुदल आयो, त्यसपछि उदारीकरणका ढोका खुले । त्योभन्दा अगाडिको विकासमा एकखाले बन्देज थियो ।
जे भयो, ०४६ सालपछि भएको हो । पासपोर्टको कुरा गरौं या अन्य कुरा । निजीकरणका कुरा पनि त्यसपछि नै आएका हुन् । त्योभन्दा अगाडि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार आमनागरिकमा थिएन । त्यसैले पनि विकासमा कसैको आँखा गएन । संसारभर चलेको कुरा के हो भने आफूले आम्दानी गरेको कमाइको अधिकार आफैंसँग हुन्छ । तर, त्यो अधिकार नेपालमा थिएन । हुनेखाने र पहुँचवालाहरूको आडमा देश चलेको थियो, जसको उदाहरण मुलुकले आर्थिक रूपमा गति लिन सकेन ।
हामी यतिबेला दोसंो चरणको आर्थिक सुधारमा छौं भनिन्छ । आर्थिक सुधारका लागि हाम्रा ऐन–कानुनहरू समय सापेक्षित बनाउन ढिला भएन ?
निकै ढिला भयो । धेरै अघिदेखि नै सरकार लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने थियो, तर त्यो देखिएन । अहिले पनि कता–कता त्यो अवस्था झल्किन्छ । हामीसँग खर्च गर्ने पैसा छैन । लगानी गर्ने वातावरण भएन, लगानी आउँछ । त्यत्तिकै त लगानी आउँदैन । सरकारले समय सापेक्षित हाम्रा ‘गुड्स’हरूको पहिचान गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
उनीहरूलाई ‘सब्सिडी’ दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो विषयमा विशेष गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो; त्यो देखिएन । अहिले हाइड्रोपावरमा सम्भावना देखियो भनेर उसैमा अंकुस लगाउने काम गर्नु भएन । हिजोका दिनमा कार्पेट, तयारी पोसाकजस्ता वस्तुको निर्यातको सम्भावना उच्च थियो, तिनलाई जोगाउन सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्ने थियो । हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा आइसक्यौं । अब विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संसारमा के भइरहेको छ त्यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाइसकेपछि नियमनकारी निकाय भएनन्, छाडातन्त्र भयो भनिन्छ नि ?
हेर्दा छाडाजस्तो देखिन्छ तर बजार त्यस्तो होइन, छैन र हुँदैन पनि । बजारले अरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ हेर्दैन । आफ्नो लागि हेर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले एउटा प्यारामिटर सेट गर्नुपर्ने हो । खुला बजार अपनाइसकेपछि प्रशस्तै विकासका ढोका खुलेका छन् । राजनीतिक कारणले गर्दा आर्थिक एजेन्डाहरूले ठाउँ नपाउने र राज्यले नियमन गर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो देखियो ।
यसले गर्दा विकासले समयमा गति लिन सकेन । अर्को कुरा, उदारीकरणमा प्रवेश गरिसकेपछि सरकार आफंैले व्यापार–व्यवसाय गर्ने भन्ने हँुदैन । मेरो विचारमा सरकारले आफूले उद्योग, कल–कारखाना चलाउने होइन; निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ भने उसलाई छाडिदिने हो । यस विषयमा शासन सत्तामा बस्नेहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारले सही वा गलत छुट्ट्याउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो भन्न मिल्छ ?
सरकारमा जानेहरूको प्रवृत्ति अलि पुरानै छ, त्यसैले पनि हुन सक्छ । राणाकालीन अवस्थामा जस्तो थियो, ठ्याक्कै त्यही नभए पनि केही हदसम्म त्यो प्रवृत्ति अहिलेका सत्तासीनहरूमा छ । आफन्त, नातागोताबाहेक अर्थात् राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन । खुलाबजार अर्थतन्त्र अपनाइसकेपछि सरकार वा आर्मी, पुलिसले बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा जायज लाग्दैन ।
प्रसंग बदलौं, सरकारले आगामी आवका लागि ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
यस पटकको वृद्धिदरलाई कायमै राख्न सक्यौं भने त्यति असहज नहोला, तर यो पटक जति सहज तरिकाले वृद्धिदर हासिल भएको छ त्यो आधारमा हुँदैन, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यति सहजै सम्भव छैन । के–केमा लगानी गर्ने भन्ने कुरामा पहिचान गर्नुपर्छ, मास्टर प्लानहरू दिनुपर्छ । दुईवटा कुरा तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ, एउटा पूर्वाधार विकास अर्को ट्रान्समिसन लाइनमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ ।
विकासका लागि रोड मात्र बनाउने भनेको होइन, रोडसँगै आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । सुरुङ मार्ग पनि आवश्यक छ । हाम्रो विकासको सिद्धान्त नकारात्मक छ । जहाँ मानिस धेरै बसोबास गर्छन् त्यहाँ विकास तुरुन्तै गर्नुपर्छ । राजधानीमै यति धेरै समस्या छ भने दूरदराजमा धेरै विकास गर्न बाँकी छ । लामो इतिहास बोकेको संसारको कुनै पनि मुख्य सहर यस्तो खराब छैन । त्यसैले विशेष योजनासहित काम गर्नुपर्छ ।
पाँच दशकअघि अपनाएको विकेन्द्रीकरणको अवधारणा बल्ल कार्यान्वयन हुँदै छ, यसले अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कता पु¥याउला ?
स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीय बजेटसँगै हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा त पहिलो पटक सीधै गाउँमा पैसा गएको छ । यो आफैंमा सकारात्मक हो । स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका छन् ।
यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । केन्द्रको पूरै अधिकार हस्तान्तरण भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो भनेको कस्तो भने, हामीलाई औषधि मात्रै पठायो, डाक्टर छैनन्, बेच्ने मान्छे छैनन्, मेकानिजम छैन । शंका गर्ने आधार धेरै छन्, यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, त्यसमा भर पर्छ ।
गाउँमा पैसा त गयो, त्यसको दूरुपयोग हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
शंका गर्ने आधार त प्रशस्तै छन् । ऐन–कानुन, मेकानिजमहरू केही बनेका छैनन् । अस्पष्ट अवस्था छ । जसरी भइरहेको छ प्रजातान्त्रिक रूपबाटै जाओस् । संघीयताप्रति म सकारात्मक छु । यसले विकासका ढोका खुल्छन् । लोडसेडिङ बल्ल हट्यो, पानी छैन, गाउँमा धेरै दुःख छ । स्थानीय जनतालाई विकासमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरा छ । यातायात सञ्जालको विषयमा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीय राज्यको पनि ध्यान खिचेको छ, तर गाउँको विकास गर्न कठिन छ ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि भन्दै २ खर्ब २५ अर्ब छुट्ट्याएको छ, यो रकम पर्याप्त छ ?
पर्याप्त होइन, तर पहिलेभन्दा गाउँमा धेरै बजेट गएको छ । त्यसलाई खर्च गर्ने आधार छैनन् । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुभवी छैनन् । पूर्वाधार विकासमा सामाजिक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । केमा खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड छैन । त्यसले गर्दा खर्च गर्न पनि समस्या देखिन्छ ।
हामी प्राकृतिक स्रोत–साधनमा धनी छौं भनिन्छ । हामीसँग भएको हाम्रो स्रोत–साधनलाई कसरी उपयोग गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा पहिले त स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ । त्योसँगै स्रोत–साधनलाई व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी नै गाउँका लागि प्रारम्भिक विकासका चरण हुन् । यिनमा ध्यान दिन सकियो भने गाउँको विकासले फड्को मार्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत करको दर घटाउने दायराहरू बढाउने भनेको छ, कसरी बढाउन सकिन्छ ?
मैले पटक–पटक छलफलमा भन्ने गरेको छु । पहिले नै करको दायरामा आइसकेका कर बढाउनुभन्दा नआएकालाई करको दायरमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यतातर्फ उसको आँखा गएकै छैन । व्यवसाय बढाउन सक्यो भने, बैंक, इन्स्योरेन्स भनौं या हाइड्रोपावरमा लगानी बढाउन सक्यो भने कर आफैं बढी आउँछ ।
हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढी छ भनिन्छ, औपचारिकतामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले कसरी करको दायरमा ल्याउने भनेर सहुलियत दिनुपर्छ । अहिलेसम्मको ट्याक्समा छुट दिने हो कि केही नयाँ स्किम ल्याउने हो ? हाम्रा धेरै लिंकेज छन्, ती लिंकेजहरूलाई मात्र करको दायरामा ल्याउन सकियो भने पनि औपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँछ ।
अन्त्यमा भनिदिनुस्, मुलुक समृद्धितर्फ लम्केको हो ?
१० वर्षअघि देशमा द्वन्द्वबाहेक केही हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो । शान्ति भयो, निर्वाचन भयो, संविधान आयो, बत्ती थिएन, १२–१४ घण्टा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन जस्तो थियो, निर्वाचन भयो ।
बजेट पनि समयमा आउँदैन जस्तो भएको थियो, बजेट पनि आयो । पानीको समस्या पनि बिस्तारै समाधान हुँदैछ भनिन्छ । भन्न खोजेको विकासका बाटाहरू बिस्तारै खुल्दै छन्, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती, देशको युवा र योग्य जनशक्ति बिदेसिएको छ त्यो जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था छ ।
चुनौतीसँगै देखिएका सम्भावना
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पटक–पटक भएका आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र आममानिसको जनजीविकामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनले आमजनताले महसुस गर्ने गरी विकास, समृद्धि तथा सुशासनको आभास दिलाउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक अग्रगमन र प्रतिगमनको खिचातानीमा समयको ठूलो कालखण्ड पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको दृष्टिले झन्डै उपलब्धिविहीन बितेको छ । विकासको गति शून्य छ भन्ने होइन, तर विकासले राजनीतिक परिवर्तनको रफ्तारसँगै आमजनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आममानिसको अपेक्षा स्वतन्त्रतासहितको समृद्ध जीवन हो, जुन पूरा हुन नसक्दा आममानिसमा निराशा छाएको छ ।
धेरै वर्षदेखि एकाध अपवादबाहेक देशको आर्थिक वृद्धिदर ३÷४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । पूर्वाधारमा भएका उपलब्धिले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । वस्तुको आयात बढ्दो भए पनि त्यही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापारघाटा अकासिँदो छ । राज्य पुनर्संरचना अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले यस मुद्दालाई समाधानको बाटोतर्फ लगेको छ भने कुल बजेटको १७ प्रतिशत स्थानीय तहलाई छुट्ट्याएर राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई व्यवहारतः सम्बोधन गरिएको छ ।
त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो बजेटमा नाराहरू छैनन् । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रमहरू पनि छैनन् । क्रमागत आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा मन्त्रालयगत योजना मात्र बजेटले समेटेको छ । विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या झेलिरहेको सन्दर्भमा यिनै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सक्यो भने पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ, जुन प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सके मुलुकले लक्ष्य राखेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन । त्यसो त यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव पनि गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसले सरकारको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भई विकास–निर्माणमा खासै ध्यान नपुग्न पनि सक्छ । अर्कातर्फ प्रशासनिक जटिलता तथा ब्युरोक्रेसीको चरित्रका कारण पनि विकास खर्च हुन नसकेको हो । यसलाई चिरेर बजेटको चुस्त कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सके देशको अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना प्रशस्त छ । त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सके मात्र पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
बजेट सार्वजनिक भएको साता दिन नपुग्दै नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि गठबन्धन उही हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा सैद्धान्तिक कठिनाइ नआउला । तर, नयाँ सरकारमा औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रको अध्ययन नगरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर विविध टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । त्यसो त विगतमा अर्थमन्त्रालय सम्हालेका विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा आदि पनि औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रका विद्यार्थी होइनन् ।
औपचारिक अर्थशास्त्र नपढेका अर्थमन्त्रीहरूको कार्यकाल पनि सफल रहेको दृष्टान्त छ भने कतिपय अर्थशास्त्रका ज्ञाता भनिएका अर्थमन्त्रीहरूको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको विगत साक्षी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन बजेट अर्थतन्त्र समृद्धि पूर्वाधार विकास